Avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava
"Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe ; ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana." Matio 4:16
"(Hoy Jesosy :) Izaho no fahazavan'izao tontolo izao." Jaona 8:12
Niresaka momba ny fiovana nentin'ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy teo amin'izy ireo, ny mponina iray tao amin'ny nosy Nias, tandrifin'i Sumatra :
«Mandra-pahatongan'ny Filazantsara teto aminay, dia toy ny olona nandeha tao anaty honahona izahay. Nilentika kokoa hatrany, efa ho faty ara-batana sy ara-panahy, lomorina satria niaina ela tao anaty faharatsiana, ary nikiky anay ny tahotra tsy misy farany ireo fanahy ratsy sy ny horohoro noho ny fahafatesana.
Tao anatin'izany anefa izahay no nahare ny Vaovao mahafaly momba an'i Jesosy Kristy. Maty sy nitsangana tamin'ny maty ho anay Izy. Nesoriny ny fahamelohanay, ary omeny anay, ety; sy dieny izao, ny fiainana mandrakizay.»
Ity lehilahy Kameroney iray indray, dia nahatsiaro hoe hatraiza ny horohorony sy ny an'ireo mpiray foko aminy, rehefa ho alina ny andro, noho ireo fanahy ratsy. Na amin'ny dia antoandrobenanahary aza izy ireo dia tsy nahatsiaro ho milamin-tsaina. Fa ny hazavana mamirapiratry ny Filazantsara kosa dia nandroaka ny haizina nandrakotra azy ireo ary nitondra fahafahana ho azy ireo. Raha vao nahazo ny Testamenta Vaovao tamin'ny fiteniny izy ireo, dia nihoraka hoe: «Ankehitriny dia hatanjaka amin'izay isika. Hampahatanjaka antsika ny Tenin'Andriamanitra».
Ny famelan-keloka mamafa ny fahatsiarovana ho meloka nandritra ny fiainana manontolo, ny fanafahana amin'ny gejan'ny ota, gejan'ny fombafomba tsy maintsy atao, gejan'ny tahotra noho ny finoanoam-poana, izany no raisin'izay mino ny Zanak'Andriamanitra. Zava-misy io fanafahana io, ary tsy very intsony, ho an'ny mpino tsirairay, na inona na inona fiaviany.
"Misaotra ny Ray, Izay ... nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina" (Kolosiana 1:12-13).